Mety hampidi-doza ny mampiasa backlinks ho an'ny orinasanao an-tserasera?
Saika ny tompon-tranonkala rehetra no mieritreritra ny mividy rohy farafaharatsiny. Tsy isalasalana fa fomba tsotra sy mahomby hananganana fanentanana fananganana rohy. Na izany aza, manontany tena ve ianao hoe firy ireo tranonkala no mahazo sazy ho an'ity hetsika ity? Ny fividianana rindran-damina dia fanitsakitsahana ny fitsipika Google ary betsaka ny fomba fijerin'i Google ny rohy karama.
Backlinks no mbola manan-danja indrindra ao amin'ny Google. Izany no mahatonga ny fandraharahana maro hanapa-kevitra ny hividy siramamy mifandraika amin'ny tranokalan-dry zareo artificially. Mety hampidi-doza izany ary mety hianjady ny fialan-tsasatra.
Na izany aza, raha mbola mampidi-doza ny hanatsara ny karoka misy anao amin'ny alàlan'ny rohy karamaina, tokony hahafantatra ianao hoe ahoana no ahafahan'i Google mamantatra ny asanao. Ity fampahalalana ity dia hanampy anao hampifanaraka ny fanapahan-kevitra momba ny fananganana trano ary hahafantaranao ireo loza mety hitranga.
Ny fomba fijerin'i Google ny rohy karama
Misy tetika telo lehibe indrindra amin'ny fomba fijerin'i Google ny rohy karohina. Ny voalohany dia rehefa mandefa spam ny mpifaninana. Google tsy tia rohy spam ary mamporisika ireo webmasters mba hitatitra ny rohy karama amin'ny tranonkala hafa. Misy mihitsy aza ny fitsipika Google manokana izay natao hampitandrina ny webmasters momba ny fiantraikany ratsy amin'ny rindrambaiko mifandraika amin'ny tranonkala. Misy rohy amin'ity torolàlana ity.
Araka ireto toro lalana Google ireto dia mety hitera-pahavoazana ny toeranao ny manaraka ireto manaraka ireto:
dokam-barotra izay mandalo PageRank;
lahatsoratra na lahatsoratra bilaogy ahitana rohy mandalo PageRank;
ny rohy amin'ny lahatsoratra fanamafisam-peo mifandraika amin'ny votoaty izay zaraina amin'ny toerana hafa;
rohy malaza kalitao na tranonkala tranonkala tsoratadidy;
rohy miafina izay misy amin'ny widgets izay miparitaka amin'ny toerana samihafa;
miaraka amin'ny rohy tsara paika amin'ny lahatsoratra na sonia.
Zava-mahazatra izany rehefa manao fikarohana manokana ny mpifaninana mba hahitana ny hetraketraky ny mpivarotra ao amin'ny tsenany sy hanala azy ireo amin'ny lalao SEO.
Ny fomba faharoa ampiasain'ny Google mba hahitana ny hetsika fananganana ny rindran-damba dia manampahaizana manokana amin'ny spam. Olona manokana mpiasan'ny Google izay nitsara ny kalitaon'ny valin'ny fikarohana Google. Ankoatra izany, misy olona mitady vahaolana sy rohy karama.
Ny fomba fahatelo, izay efa henonao taloha, dia algorithm Google. Google dia afaka mampivelatra algorithm izay ahitanao ny rohy naloa mifototra amin'ny tatitra momba ny fifandraisana voarakitra. Ohatra, nanoratra imbetsaka ny Google webmaster fa ny algorithm Google dia afaka namantatra ny rohy naloa talohan'ny notaterina azy ireo tamin'ny tatitry ny spam.
Mba hisorohana ny sazy amin'ny Google, tokony hiala amin'ny fampiasana rafitra fananganana rafitra feno automatique ianao. Ireo rafitra ireo dia natao manokana hanitsakitsaka ny algorithms amin'ny Google. Noho izany toe-javatra izany dia afaka mampiova ny loharanon'ny tranonkala Google raha toa ka hitan'ny rafitra fa ny tranonkala dia mandray anjara amin'ny rafitra rohy toy izany Source .